आज २०७८ साल चैत ५ गते शनिबारको राशिफल - बडिमालिका खबर
आज २०७८ साल चैत ५ गते शनिबार। ज्योतिष शास्त्रमा चन्द्रमा अनुसार दैनिक फलादेश हुन्छ। सोही अनुसार उनीहरूको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ। तपाईँको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको फलादेश: २०७८ चैत ५ गते शनिबार
मेष : दिन सामान्य राम्रो छ। आयआर्जन बढ्नेछ। कुरा काट्नेहरु बढ्नेछन्। राजनीति, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र यथास्थितिमा छ। वैदेशिक क्षेत्रमा गरेको श्रम लगानीबाट सोचेभन्दा राम्रो नतिजा प्राप्त हुनेछ। प्रेममा सफलता मिल्नेछ।
वृष : दिन सामान्य राम्रो छ। आज राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक क्षेत्रमा धेरै राम्रो छ। प्रेममा असफलता मिल्नेछ। अनावश्यक खर्च पनि बढ्नेछ।
मिथुन : दिन सामान्य राम्रो छ। प्रतिस्पर्धी निस्तेज हुनेछन्। कुरा काट्नेहरु बढ्नेछन्। यात्रा गर्दा सचेत हुनुहोला। शिक्षाको क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट राम्रो नतिजा मिल्नेछ।
कर्कट : आजको दिन सामान्य छ। बोलीमा प्रभाव रहनेछ। राजनीति क्षेत्रमा धेरै राम्रो छ। खुट्टा तान्नेहरु धेरै छन्, सचेत हुनुहोला। शिक्षाको क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ।
सिंह : दिन सामान्य राम्रो छ। आयआर्जन बढ्नेछ। घमण्ड बढ्नाले साथीभाइसँगको सम्बन्धमा कटुता बढ्ने सम्भावना छ। राजनीति, सामाजिक, वैदेशिक, पारिवारिक क्षेत्रमा सामान्य रहेपनि श्रमबाट राम्रो परिणाम आउनेछ। प्रेममा धोका पाइनेछ।
कन्या : दिन निकै राम्रो छ। बोलीमा मिठास हुनेछ। आज थालेको कामले दीर्घकालीन फाइदा पाइनेछ।
तुला : दिन राम्रो छैन। बोलीका कारण अफ्टेरोमा परिनेछ। कुनै पनि नयाँ योजना नबनाउनुहोला। शिक्षाको क्षेत्रमा सक्रिय हुँदा मन शान्त हुनेछ।
वृश्चिक : दिन सामान्य राम्रो छ। शत्रु नाश हुनेछ। पठनपाठनमा मन जानेछ। यात्रा गर्दा ख्याल गर्नुहोला। बिहान गणेश भगवानलाई सम्झनुहोला।
धनु : दिन सामान्य राम्रो छ। मनमा शान्ति मिल्नेछ। मानसम्मान बढ्नेछ। अलमलमा रहेका कार्य सुचारु हुनेछ। प्रेममा सफलता मिल्नेछ।
मकर : दिन सामान्य राम्रो छ। आम्दानी राम्रो हुनेछ। सोचेर बोल्नुहोला, बोलीमा दोष लाग्नसक्छ। साथीभाइबाट सहयोग मिल्नेछ। वैदेशिक लगानीले आम्दानी बढ्नेछ।
कुम्भ : दिन सामान्य छ। देखेको कुरा भन्न पनि समस्या आइपर्नेछ। आजको दिन सम्पत्ति कमाउने भन्दा पनि जोगाउने प्रयासमा लाग्नुहोला। पुरानो रोग बल्झने भएकाले खानपाानमा ख्याल गर्नुहोला।
मिन : दिन धेरै राम्रो छ। रोकिएको कामहरु बन्नेछन्। रोग मुक्त हुनेछ। शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। प्रतिस्पर्धीबाटसमेत मानसम्मान पाइनेछ।
आज २०७९ साल जेठ ३ गते मंगलबारको राशिफल
आज २०७९ साल जेठ १ गते आइतबारको राशिफल
आज २०७९ साल वैशाख ३१ गते शनिबारको राशिफल